ဖုန်သုတ်ဖို့ကလည်း ကိုယ့်လက်ထဲ အ၀တ်ကမရှိ ..
တနေ့တနေ့စားရေးသောက်ရေး ၀တ်ရေးဆင်ရေး လုပ်လိုက်ရတာ လုပ်လိုက်ရတာ။　(ငြီးတွားသံ)
ခုတစ်လော နည်းနည်းတော့လွဲနေတာ သတိထားမိတယ်။ သမီးငယ်ရဲ့အိပ်ယာမှာ သွားသွားအိပ်မိတယ်။ သမီးက ကျွန်မအိပ်ယာမှာ လာအိပ်တယ်။ သူတို့အိပ်ပျော်ရင် ကိုယ်က သူ့ကုတင်ပေါ်ပြန်သွားအိပ်နဲ့။
၆နှစ်သမီးအိပ်ယာဆိုတော့ဘာဘီခေါင်းအုံး၊ဘာဘီစောင်တွေအပြင် မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်တာနဲ့ကုတင်ဘေးလမ်းကြည့်လိုက်ရင် ဘာဘီညိုညိုတွေ ရွှေရောင်ဘာဘီတွေ တစ်ချို့လည်း အ၀တ်မပါ. တစ်ချို့လည်း ဆံပင်တွေ ပွယောင်း လို့
ခြင်ထောင်ပန်းရောင်ရယ် ဘာဘီစောင် ဘာဘီခေါင်းအုံးရယ် နောက် မိုးလင်းတာနဲ့ ဘာဘီရုပ်ကို ခေါင်းဖီးပေးနေတဲ့ကျွန်မရယ် ...
သမီးငယ်အခန်းထဲ ကိုကိုက ၀င်လာတော့ပြုံးတယ်။
အော် သူ့ခမျာ စောစောစီးစီးသူငယ်ပြန်ရတယ်လို့ကွယ် ဆိုတဲ့အပြုံး
တခါတခါလည်းစိတ်နဲ့လူနဲ့သိပ်မကိုက်လှ။ အတွေးမှာ မျောတတ်သူမို့
လမ်းသွားရင်း FMတို့ဘာတို့သိပ်နားမထောင်တတ်သူ။ ခုတစ်လောတော့ FM ဖွင့်မိနေတယ်။
ကျွန်မက ဂျီလတ် (ဘာလာလာ) ဆိုလားသီချင်းကို ကြိုက်တော့ ဂျီလတ်ဆိုတာ ရှာပီးကြည့်ထားသူ။ယူ တို့လည်း ဂျီလတ်သိမှာပေါ့ နော့်….
စနေနေ့ကတော့ ဂျီလတ်နဲ့ပရိသတ်ဖုန်းပြောတာ FM မှာလာရော…
ဘာကြောင့်များ ပရိသတ်တွေက သီချင်းဆိုပြခိုင်းလည်းမသိနော် .. ဆက်သူတိုင်းက သီချင်းလေးဆိုပြပါရှင့်တဲ့.
ပရိသတ်။ ကိုဂျီလတ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလား။
ဂျီလတ်။ ခင်ဗျာ ရိုက်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်လုပ်လည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးတဲ့
ဗုဒ္ဓေါ…. လို့ပဲ တမိတယ်။ နောက် တခီးခီးရယ် နေမိတာ။
ပိသတ်ကြီးရယ် ဂျီလတ်က မင်းသားလုပ်လို့ရတဲ့ ကိုယ်လုံးလားလို့ …
လိုင်းကားတစ်စီးက ကိုယ့်ရှေ့မှာ အောင်မယ် စပယ်ယာက တော့ထင်မှာပဲ ငါ့ကိုဆိုမေတ္တာပို့တဲ့သူတွေ များတာကို ဒီတစ်ယောက်ကတော့ ရီပြနေပါလားလို့။
ရုံးအလုပ်တွေ၊ မိသားစုအလုပ်တွေ ကတော့ ရှုပ်ရှတ်ခပ်နေတာပါပဲ။
ဂျပန်မှာတုန်းက ၂ နာရီလောက်အထိ် ဘလော့ဖတ်တဲ့ကြည်ကြည်ဆိုတာ ဘယ်သူလည်းထင်ရလောက်အောင်ပင် ည ၁၀ လောက်ဆို လူကဒေါင်းနေပြီ။။ ခလေး၂ ယောက်လုံးက သူတို့ကျောလေးပွတ်ပေး ဒါမမဟုတ် တင်ပါးလေးပုတ်ပေးမှ အိပ်ချင်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လည်း story book ဖတ်ပေးရင်းငိုက်ငိုက်သွားတာတို့ဆို သမီးငယ်လေးက မနက်ဆို စတယ် မေမေညက စာဖတ်တာ
၀ူးဝူးဝါးဝါးတဲ့ ။ တစ်နေ့ကတော့ ငိုက်ကနဲ ဖြစ်ရင်းနဲ့ အိပ်ကလူကြီးတင်ပါးကြီးသွားပွတ်ပေးနေမိတယ်။
၁၀ခါရံတစ်ခါတော့ အပေါင်းသင်းတွေရဲ့ မွေးနေ့တွေ၊ မိပ်ကပ်အရောင်းမြင့်တင်ရေးတွေ၊ အကျီဆိုင်ပရိုမိုးရှင်းတွေ သွားတတ်ပါတယ်။ ပြောဖူးလားပဲ အိမ်က ဖေဖေက ကျွန်မကို ခေါ်တာ မယ်လမ်းတဲ့
မယ်မဒန်းတဲ့။ အပြင်များသွားမယ်ဆိုရင် ခလေးတွေကိုမေ့လို့တဲ့။
မိပ်ကပ်လိမ်းနေတဲ့ကျွန်မကို တစ်ချက်ငှဲ့ကြည့်ရင်းသားက သူ့အဖေနဲ့ ဖုန်းပြောနေတယ်။
သားသားပြောနေသံ။ မေမေလားဖေဖေ ဟုတ် မော်ဒယ်ရှိုးသွားမလို့တဲ့ ဟုတ်ဖေဖေ
မေမေလျှောက်မှာလားမသိဘူး ဖေဖေ. ဟုတ်ဖေဖေ ပေါင်ကြီးကတော့ အကြီးကြီးပဲ …
ဗုဒ္ဓေါ … ငါ့သားတော့ ငါ့ကို အထင်လွဲနေပြီ။
တနင်္ဂနွေနေ့တစ်နေ့က မေမေတစ်ခါတစ်လေဟင်းချက်လေကွာ။ မာမီ(ကျွန်မညီမကိုခေါ်သည်) ချက်တာလည်းကောင်းတယ်။ ဖွားဖွားချက်တာလည်းကောင်းတယ်။ အိုခေ မေမေ နန်းကြီးသုပ်လုပ်ကျွေးမယ်နော်လို့ ကျွန်မကတိပေးလိုက်တယ်။
သမီးလေးက လက်ခုပ်တီးတယ်။ သူက နန်းကြီးသုပ်ကြိုက်သူ။
ခေါင်းငုံစားနေတဲ့ ခလေးတို့ဖေဖေက သူ့သားကို ကောင်းပါတယ်သားရ စားပါကွ။
သမီးငယ်လေး စားလေ ဆိုပီးတော့ ကိုယ်တော်ပီနော် လို့ ကျွန်မကိုပြောပြီး သူ့ပန်းကန်ထဲကိုတော့ပြောင်အောင်စားလိုက်တယ်။
သားက သက်ပြင်းချတယ် နောက်ရေခွက်ကိုလှမ်းယူတယ်။
မေမေ့ကို အားကြီးချစ်တယ်ကွာလို့ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ပြောလာရော တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ
မမထူး (အိမ်ကကောင်မလေး)သားပန်ကန်းသိမ်းလိုက်တော့တဲ့ ပန်းကန်ထဲမှာ တစ်ဝက်တောင်မကုန်ဘူး။
သူတိ်ု့သားအဖ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ပြီးရီလိုက်ကြတယ်။
ဒီည သားက home work ပါလာတယ်မေမေဆိုပီး A4 ကိုဖတ်တယ်။
What is interview မေမေ ဆိုပီး မေးလာတယ်။
Primary3(English)
Interview someone at your home.
The name of the person that you interviewed …………………………..
How is your relation with that person ?.......................................
(Father or Mother or Sister.etc)
Use these questions and write the answers.
1.what are you doing.
2.What is your favourite food ?
3.What are you going to do next week?
4.Do you often read story books?
တဲ့ ကျွန်မကို ဗျူးတယ်။
Do you love your husband and How many kids do you have လို့ ကိုယ်တော်က ရှည်လာတယ်။
အမြဲတမ်းသူ့ကို ချစ်ဆုံးလို့တိုးတိုးလေးပြောတာကို သူက ကြားချင်တာကိုး။
Ohh… what are you talking about. I am single. I am apyogyi လို့ ဖြေလိုက်တော့
စာရွက်အကြမ်းမှာ ဘောပင်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းချရေးလိုက်တယ်။ပါးစပ်ကလည်း စလုံးပေါင်းနေတယ်။
အက်စ်အခ်ျအီး ရှိ အက်စ်အေအိုင်ဒီ ဆက်ဒ့် အက်စ်အိုင်အန်ဂျီအယ်လ် အီး စင်ဂဲယ်.
အိုင် ဒုန့်နိး ၀ဲယား အိုင် အမ် အက်ဖ် အာ .အို အမ်မ် တဲ့။
Posted by ကြည်ကြည် at 8:47 AM
khin July 1, 2012 at 5:58 PM
HaHa....I love the way your son saying to you...pls say Hi to him..
မဒမ်ကိုး July 1, 2012 at 6:06 PM
အက်စ်အခ်ျအီး ရှိ အက်စ်အေအိုင်ဒီ ဆက်ဒ့် အက်စ်အိုင်အန်ဂျီအယ်လ် အီး စင်ဂဲယ်.
Anonymous July 1, 2012 at 10:57 PM
Love this post, especially the cute little son wrote down the words, " i don't know where i am from"!
ညိမ်းနိုင် July 2, 2012 at 2:10 AM
သဘောကျသဗျိုး....၊ငိုက်ရင်း အိမ်ကလူကြီးတင်ပါးသွားပွတ်ပေးမိတယ်ဆိုလို့ ရီလိုက်ရတာ...:)))
mstint July 2, 2012 at 2:12 AM
မိသားစုလေးအကြောင်း ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာပဲ ကြည်ကြည်ရေ။ အဖထက်သား တစ်လကြီးတဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီလေနော်း)
မွန်မွန်ယိုကို July 2, 2012 at 6:41 AM
သားကို အုိုင်မမ် စင်ဂယ်လ် ဝဒ် တူးချရေးဒါန်း လို. ပြန်ဖြေလိုက်ပေါ. မကြည်။
အဟား ဟား သားကတတ်လိုက်တာ။
မိုးငွေ့........ July 2, 2012 at 7:31 AM
မိုးယံ July 3, 2012 at 12:35 AM
ဟမ်....လက်စွပ်သွပ်တော့ ပေါင်တုတ်ကြီးနဲ့ မေမက သူငယ်ပြန်ပြီး အိမ်ကလူကြီး တင်ပါးကို သွားပွတ်ပေးနောကိုး...စာဖတ်ပြီး ရင်ထတ်သွားတာ..တော်သေးတာပေါ့...လက်စသတ် သူက အပျိုကြီး ဖစ်နေတာဂိုး... ဟီဟိ
မြသွေးနီ July 3, 2012 at 1:46 AM
အလုပ်ကတစ်ဖက်၊ သားသားမီးမီးတွေနဲ့ အလုပ်တွေများပြီး ပင်ပမ်းပေမယ့် ပျော်နေမယ့် ကြည်ကြည့်ကို မျက်လုံးထဲ မြင်နေမိတယ် ကြည်ကြည်ရေ...:)
san htun July 7, 2012 at 8:53 AM
မမကြည်ကြည် သားလေးရေးတာ ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်တာ..မိသားစုတွေ ပျော်ရွှင်နေတာကြည့်ပြီး အားကျပါဘိ..
Mary Grace July 20, 2012 at 6:53 AM
richelle co July 30, 2012 at 5:32 AM